Yini okufanele ugqoke for party party?
Abesifazane ngokulindela umzuzu lapho beya emcimbini wezinkampani, begijimela ukuthola ingubo, ukuthi yini okufanele bagqoke? Izembatho zezinkampani kufanele zifake imfashini, zihlakaniphile, kodwa zingabonakali. Vula ama-sweaters bright and skirts sexy afanele usuku lothando, ngokubuthana nezintombi, ngokuba isidlo sakusihlwa embuthanweni womndeni wakho, kodwa akufanelekele inkampani.
Abaqambi bafakazela ngokuvumelana ukuthi namuhla ngempela "ingubo encane emnyama". Abesifazane bayaqhubeka bethemba le guarantor isitayela esingenakuqondakala, futhi lapho kuqala amaholide ukuthambekela komgqoko omnyama kwanda izikhathi eziningana.
Abaqambi kumqoqo wabo ngamunye bahlanganisa "ingubo encane emnyama". Ungaphiki isitayela nokuphakama kwalo mbono, ungafakwa ngemininingwane ehlukile yangempela. Ukusikeka okungaqondakali kwengubo emnyama kungahlotshaniswa ngamatshe, amathoni amakhulu. Kungaba nokuhluka okuhlukile kokunqunywa.
Ukugqoka kunguhlobo oluphephile nolungcono lwezingubo zenkampani yenkampani. Indwangu ihlale ihle kakhulu, isitayela nesifazane. Kungaba omnyama, isinamoni noma imibala ye-pastel. Kuzobukeka kuhle kokubili ngokuhlanganiswa nejacket noma i-cardigan, futhi yedwa. Isibonelo, igqoke le-decollete lingenziwa lihlotshwe ngamabhande amancane. Lesi sitayela sizogcizelela isifuba sosayizi omkhulu futhi sizonikeza ivolumu ngesayizi elincane lesifuba. Ngentamo ungagqoka ubuhlalu bamatshe futhi uzobukeka umangalisa.
Khumbula ukuthi ingubo yenkampani yenkampani akufanele ibe yinto enomsindo. Uma emsebenzini unesitayela sokuthobeka, akudingeki ukwethuse ozakwabo emzimbeni wobumbano ngokuziphatha okufisa kakhulu, lipstick ebomvu elikhanyayo kanye ne-franklete enqabile kakhulu. Konke lokhu ndawonye kuyoholela ekucabangeni kokungaqiniseki kwakho nokungahambisani.
Ukuguqulwa kwakho ibe yindwangu yesifazane kuyobangela ukukhathazeka ebukhosini, futhi kuye ezingeni elingenakuqaphela kuyoba nemicabango: "Mhlawumbe ukukhathazeka yiyona mfanelo yakhe yangempela, futhi, mhlawumbe, uphatha ngokungathí sina?" Ngisho noma empilweni uyibhomu langempela lobulili futhi emsebenzini akekho owaziyo ngakho, kungcono ukuthi unganamatheli ubulili bakho futhi uqaphele indawo ephakathi kwenkampani.
Ingubo yebhizinisi ngeke ibe yinduna uma ukhetha ngokucophelela ubucwebe, izesekeli, izicathulo eziphezulu, ukuzenzela kanye nekhanda. Lapha ukuthi unomcabango owanele, uqala ngobuhlalu, ama-brooches, i-lace futhi uphela ngezinwele zezinwele kanye ne-diesel ekhanyayo. Into esemqoka akufanele ihambe kakhulu nemiklamo nezesekeli, ngoba uyindlovukazi, hhayi ipaki.
Qinisekisa ukuthi ucabanga ngezinwele zakho kanye ne-makeup. Kufanele abe ngesitayela esifanayo nesithombe sonke. Ukugcizelelwa okukhethekile kufanele kufakwe emanzini. Kulungile ngaso sonke isikhathi ukubuka izipikili ezihlotshiwe kahle ngombala obomvu obala. Ungathatha nawe ube nemfashini omuhle wezemfashini futhi yiqiniso, isimo sengqondo esihle.
Khetha isitayela seqembu lezinkampani, ucabangela ukungaphumeleli kanye nokufaneleka komfanekiso.
Ukusikwa okujulile ngemuva kunjengokukhangisa njenge-decollete, futhi kubonakala kunamathekisthi.
Ingalo ye "American" izovula amahlombe ayo futhi ilulaze izikhalazo zazo ezingenangqondo.
I-corset izokwazi ukufanekisela isimo esifisayo.
Umthamo odingekile uzowengeza amafolda wokushisa okulula.
Ukugqoka ngemigqa ehlukene yokusika kanye ne-oblique ngezansi kwandula ukukhula futhi kunikeza okuncane.
Njengezindwangu zokugqoka, kungcono ukhethe izindwangu ezilula, ngeke uzizwe ushisayo kuzo futhi zibukeka zikhululekile.
Uma uthanda ukugqoka amabhulukwe, bazobukeka behle kakhulu nge-smart top nejacket. Kulokhu, kuhlanganise namabhulukwe amakhulu awenziwe ngendwangu egelezayo ngamafolda athambile noma ama-trouser tight-puffs.
Yizo zonke izimfihlo. Ukukhetha okuphumelelayo kwezembatho kuyisiqinisekiso sokuzizwa kahle, ngezinye izikhathi ukukhula okuhle komsebenzi. Futhi isikhumbuzo sokugcina. Iqembu lomphakathi, ekugcineni, lizophela, emva kwalokho kuzodingeka ukuthi ubuyisele isithombe sesifazane wesifazane.
Khetha izingubo ezimfashini ngokuhlakanipha
Indlela yokukhetha izingubo ngohlobo lwesibalo
Isigqoko sebhizinisi lesabelomali: izithombe ezintathu zasehlobo
Umbala omhlophe izingubo
Pilaf ku-Polaris Multivariate
Ukuhamba eqhweni elingenamikhono
Indlela yokufundisa isiNgisi ingane
Intsha yobunandi: izintshumayelo zokulwa nokuguga uGuerlain Abeille Royale
U-Ashley Simpson: amaqiniso angu-12 okuphila kwe-stellar
Amazambane amazambane anamafutha kanye ne-ricotta
Ukuphila komuntu siqu kaLyudmila Gurchenko
Ukunakekela i-hydrangea ingadi: imithetho eyisisekelo
Indlela yokunquma uhlobo lwezinwele
UGuerlain Idill - iphunga elisha